Su'aal: Galmada cafimadka leh?
Author Topic: Su'aal: Galmada cafimadka leh? (Read 5175 times)
« on: April 12, 2012, 02:41:38 AM »
Waan idin salamay walalayaal dhamantin.
Waxan raba inan idin waydiyo su.al ah nin rag ah oo 31 sano jiro wax xanun ahana an qabin hada igu cecelis ahan meqa mar ayau xaskisa week kasta u galmoon kara xaskisa cafimadka maxu ka qaba mesha ugu hoseso ama ugu sareso ee galmada celcelis ahan week meqa ayee noqon karta.
hada waa 31 jir week wuxu galmoda 2haben habenkian 2mar ayuu turta game ka intaas miya lagu dhihi kara waa u buxu cafimadkisa mise wax kalo oo u samenayao aya jiro plz fahfahin iga siya arintaas mahadsanidiin dhamantiin
Re: Su'aal: Galmada cafimadka leh?
« Reply #1 on: May 19, 2012, 04:50:21 PM »
Wax dhib ah hadduusan qofka uusan dareemin dhinac walbo galmada ka dib isagoo aanan adeegsan daawooyina ama farsamooyin kale oo wax lagu xoojiyo, caafimaad ahaan dhib ma qabo waa la dhihi karaa.
Ma jirto tiro la xadiday oo la dhihi karo qofkii intaa ka badiyo caafimaadkiisa waxbuu u dhibayaa.
Views: 15035 September 16, 2015, 02:20:23 PM
Views: 45471 January 01, 2011, 08:43:27 PM
Views: 26693 March 31, 2017, 07:43:12 PM
Views: 19721 June 12, 2009, 12:08:53 AM
Views: 77886 June 05, 2011, 06:41:43 PM